भारतमा अलपत्र परेका भन्छन्ः आधा पेट खाएर बाँचेका छौँ, हाम्रो उद्धार होस् – email khabar | Latest news of Nepal
भारतमा अलपत्र परेका भन्छन्ः आधा पेट खाएर बाँचेका छौँ, हाम्रो उद्धार होस्
प्रकाशित : २०७७ जेठ १२ गते १४:०२
जेठ १२, काठमाडौ- “एउटा कोठामा १२ जना छौँ, दैनिक एक छाक खाना खाएर भोको पेटमा बन्द कोठाभित्र बस्नुपर्ने बाध्यता छ, आँसु चुहाउँदै बसेका छौँ । हाम्रा कुरा सुनिदिने को छ र ” यो भनाइ हो, जाजरकोट छेडागाड नगरपालिका–१२ का बिर्खबहादुर खत्रीको ।
उनी अहिले जनपद चमौली उत्तरखण्ड धराली भारतमा छन् । आफूहरुको गुहार सुन्ने कोही नभएको भन्दै खत्रीेले टेलिफोनमार्फत राससलाई भने । “४७ जना गाउँले तीनवटा कोठामा बन्दी जस्तै जीवन बताइरहेको छौँ”, अर्का देवबहादुर बस्नेतले रुँदै भने, “बाहिर आए भारतीय प्रहरीले लाठीले हिर्काउँछ, कोठामा खाने खाद्यान्न सकिएको छ ।” “४१ दिनसम्म कमाएको पैसा सबै खाएर सकियो, राहत कसैले दिँदैन कसरी बाँच्ने हामीलाई उद्धार गर्नुप¥र्यो”, उनले भने ।
पीडा र बेदनाका बीचमा कामविहीन भएका ४७ जना छेडागाड नगरपालिकाका नागरिक रुँदै कराउँदै उद्धारका लागि याचना गरिरहेका छन् । दैनिक घर परिवारले फोनमा कुरा गर्दा कस्तो छ ? के छ ? भनी सोध्दा, सधैँ ढाँटेर हामीलाई राम्रो छ । चिन्ता नलिनु भन्दै आश्वस्त पार्ने काम गरिरहेको समेत सिंर्गे कामीले बताउनुभयो । “घरमा ऋण थियो, तिर्नका लागि सुत्केरी श्रीमतीलाई छाडेर कालापार आइयो, यहाँ पनि मरिन्छ कि, बाँचिन्छ थाहा छैन”, कामीले भने । गरिबलाई जहाँ आए पनि पीडा र दुःखमात्र हुँदोरहेछ, कतै कोरोना लागेर हामी पनि कुकुर मरेझैँ हुन्छौँ कि भन्ने चिन्ता लाग्छ, कामीले थपे ।
अभाव र बाध्यताको बीचमा हुर्किएको कर्म जहाँ गए पनि ठक्करमात्र खान्छ कुनै बेला मरिहालौँ कि जस्तो पनि लाग्छ तर घरमा सानो छोरीलाई आँखा अगाडि झलझल सम्झिन्छु, अनि बाँच्न मन लाग्छ तुलवीर चदाराले फोनमा रुँदै भने । हामीलाई सरकारले छिटो उद्धार गर्नुप¥र्यो, हाम्रो एउटै सपना अब घर पुगेर आफ्नै भूमिमा इलम गरेर खाने हो चदाराले भने । दैनिक घरपरिवारसँग ढाँटेर कति दिन अर्काको भूमिमा बस्ने ? नेपालमा परिवार चिन्तामा छन्, यता हामी चिन्तामा छौँ मनबहादुर लुहारले भने ।
दैलेखमा अहिले एक हजार ७९ जनामात्र क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन् । सुर्खेतका स्थानीय तहका क्वारेन्टिनमा ८०० र प्रादेशिक क्वारेन्टिनमा ७८ जना बसिरहेका छन् । सल्यानमा ७२० भारतबाट आएका भएपनि अहिले ५२५ जना सामुदायिक क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन् । यो प्रदेशमा २७ कोरोना विशेष उपचार केन्द्रमा ५४० आइसोलेशन श्यया रहेका छन् । त्यस्तै अस्पतालमा १५१ कोरोना विशेष श्यया, १७ भेन्टिलेटर तथा ४० आइसियु श्यया रहेका छन् ।हेमन्त केसी रासस
लकडाउन–घरघरमा निःशुल्क खाद्यन्न डेलिभरी गर्दै सरकरी कम्पनी